नेपालीकै होचो मान्छे भेटिए, २१ वर्षीय प्रकाशको उचाइ मात्र ३१ इन्च
पथरी, मोरङ, १७ माघ – विराटनगर–१९, बैजनाथपुर नहरटोलका २१ वर्षीय प्रकाश सरदारको उचाइ मात्र ३१ इन्च छ । देशभर रहेका होचाको उचाइलाई गुगलमा सर्च गर्दा यति उचाइको व्यक्ति अरू भेटिनु भएन ।
“मैले धेरै ठाउँमा सोधखोज गरेँ तर, प्रकाशको उचाइजस्तो नेपाली नरहेको जानकारी पाएको छु ,” वडाध्यक्ष सरदारले भन्नुभयो । संसारकै होचा चन्द्रबहादुर डाँगी २२ इन्चका हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधन भइसकेको छ । खगेन्द्र थापामगर (पोखरा) उचाई २ फिट २६ इन्च थियो । संसारकै होचा कलाकार काठमाडौँका दीपेनको उचाइ ३१ इन्च थियो । उहाँको केही महिनाअघि निधन भएको थियो । “नेपालमा सबैभन्दा होचा व्यक्तिबारे सम्पूर्ण तथ्यांक लिएर हामी प्रकाशको पक्षमा केही गर्छौं”, प्रमुख पराजुलीले भन्नुभयो ।
यता मोरङ सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले देशकै होची महिला सार्वजनिक गरेको थियो । प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले सुन्दरहरैँचा–४ निवासी रमेशप्रसाद मुरर ऋषिदेवका १९ वर्षीया छोरी मालती (उचाई ३२ इन्च र वजन १४ किलो) लाई सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । प्रमुख ढकालले नगरपालिकाबाट मालतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । रासस
प्रकाशित : बुधबार, माघ १७, २०७४१०:२५
सन् २०१७ सम्ममा ५५ लाख अफ्रिकी विस्थापित
ट्र्याक्टरले किचेर चालकको मृत्यु
मकर सङ्क्रान्तिमा नुवाकोटमा चालीस हल गोरु जुधाइँदै: यस्तो छ गोरु जुधाईको इतिहास
कलेज जान ५ बजे घरबाट हिँडेकी सुधाको झुन्डिएको अर्धनग्न शव फेला ! के उनको हत्या भएको थियो ?
हात्तीले आक्रमण गर्दा खाजा पसलमा काम गर्ने वाइबाको मृत्यु !